ယူနိုက်တက် ယာယီနည်းပြ ဖြစ်လာမယ့် ရန်းနစ် ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး အမြတ်အစွန်းများစွာ ရစေခဲ့တဲ့ ကစားသမားကောင်းများ - xyznews.co
ယူနိုက်တက် ယာယီနည်းပြ ဖြစ်လာမယ့် ရန်းနစ် ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး အမြတ်အစွန်းများစွာ ရစေခဲ့တဲ့ ကစားသမားကောင်းများ
ဂျာမန် လူမျိုး နည်းပြ ရပ်ဖ် ရန်းနစ် ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ယာယီ ကိုင်တွယ်ဖို့ အားလုံး သဘောတူညီမှု ရရှိ ခဲ့ပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
ယာဂင် ကလော့ ၊ သောမတ်စ် တူချယ် ၊ ဂျူလီယန် နာဂယ်စမန်း စတဲ့ ခေတ်သစ် ဘောလုံးနည်းပြမျိုးဆက် က ဆရာတဆူလို့ သတ်မှတ် ခေါ်ဝေါ် ခံထားရတဲ့ ရန်းနစ် ဟာ နည်းပြ အလုပ်ကနေ စီမံခန့်ခွဲမှု ဘက်ကို ကူးပြောင်း ခဲ့တာ ကြာပါပြီ ။
မနှစ်တုန်းက ချဲလ်ဆီးရဲ့ ယာယီနည်းပြ ကမ်းလှမ်းမှု ကို ငြင်းခဲ့ဖူးပေမယ့် ဒီတခါ မှာတော့ ရန်းနစ် ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားမှု ရှိလာခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး နည်းပြကြီး ကလော့ ကတော့ ရန်းနစ် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ရောက်လာတာဟာ ပြိုင်ဘက် အသင်းတွေ အတွက်တော့ သတင်းကောင်း မဟုတ်ဘူးလို့ ထုတ်ပြောလာခဲ့ ပါတယ် ။
ရန်းနစ် ဟာ မော်ဒန်ဘောလုံး လောကမှာ ခေတ်စားလာတဲ့ Gegenpress ကစားနည်းကို အစပြု ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ သူ့ရဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ကွဲပြားတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဆင့်ပွား အသုံးပြုတဲ့ နည်းပြတွေ အများအပြား ရှိလာခဲ့ ပြီဖြစ်ပါတယ် ။
ရန်းနစ် ဟာ ဒီလို ကောင်းမွန်ပြီး ရသပေးတဲ့ ဘောလုံး ကစားနည်းသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ရုံသာ မကပါဘူး ၊ ဘောလုံး လောကထဲမှာ ကျဉ်လည် နေတဲ့ မြောက်များစွာသော ဘောလုံးသမားတွေ ထဲကမှ အရည်အချင်း ရှိသူ ၊ အလားအလာ ကောင်းသူတွေကိုလည်း ရှာဖွေ ဖော်ထုတ် မြေတောင်မြှောက်ပေး နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
သူ ခေါ်ယူပေးခဲ့ဖူးတဲ့ အထဲက တောက်ပ အောင်မြင်လာတဲ့ ကစားသမားတွေ ကတော့ . . .
၁ ။ ဆာဒီယိုမာနေး ( ပေါင် ၃.၄ သန်း )
ရန်းနစ် ဒါရိုက်တာ အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ရက်ဘူး ဆဲဘတ် ကို ဆာဒီယို မာနေး ရောက်လာတုန်းက အသက် ၂၀ ပဲ ရှိပါသေးတယ် ၊ သူ တရာသီပဲ ကစားခဲ့တဲ့ မက်ဇ် အသင်း တန်းဆင်းခဲ့ပြီး နောက်ရာသီမှာပါ ။ အခု မာနေး အသက် ၃၀ ရှိနေပါပြီ ။ ဒီဆယ်နှစ်တာ အတွင်းမှာ သူ ရယူခဲ့တာတွေက အံမခန်း ပါပဲ ။
၂ ။ အာလင်းဟာလန်း – ပေါင် ၆.၇၅ သန်း
ဟာလန်း ဆဲလ်ဘတ် ကို ရောက်လာချိန်မှာ ရန်းနစ် မရှိတော့ ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် နော်ဝေသားလေးကို ခေါ်ယူမှုမှာ ရန်းနစ် ပြုစု ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေက အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ် ။
ဟာလန်း ရဲ့ အကြောင်းကိုတော့ ထူးထွေ မိတ်ဆက်နေဖို့ လိုမှာ မဟုတ်တော့ ပါဘူး ။
၃ ။ နာဘီ ကီတာ – ပေါင် ၁.၂ သန်း
“၂၀၁၄ တုန်းက ကျွန်တော့ကို ခေါ်ဖို့ ပြင်သစ်ကို သူ ရောက်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ကျွန်တော့ အတွက်တော့ သူက အယုံကြည်ရဆုံး လူသားပါပဲ ။ ကျွန်တော့ကို သားအရင်း တယောက်လို ဆက်ဆံ ခဲ့တာပါ” လို့ နာဘီ ကီတာ က ရန်းနစ် နဲ့ သူ့ရဲ့ အကြားက ဆက်ဆံရေး အကြောင်းကို ဖွင့်ဟပြောဆို ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
ရန်းနစ် ဟာ ကီတာ ကို ပြင်သစ် ဒုတိယတန်း ကလပ် ကနေ ဂျာမန် ကလပ် လိုက်ပ်ဇစ် ဆီ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး အခုချိန် မှာတော့ ဂါနာသားဟာ လီဗာပူး နဲ့ အတူ ချန်ပီယံလိဂ် နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ဖြစ်လို့ လာခဲ့ပါပြီ ။
၄ ။ လူးဝစ် ဂူစတာဗိုလ် – ပေါင် ၈ သိန်း ၅ သောင်း
ဘရာဇီး ကလပ် ကိုရန်သီယန် အလာဂိုအာနို ကနေ ခေါ်ယူ ခဲ့တဲ့ ဂူစတာဗိုလ် ကို ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ဆီ ရောင်းထုတ်ခဲ့တာဟာ ရန်းနစ် ကို အံ့အားသင့်စေခဲ့ ပါတယ် ။
ဟော့ဖမ်ဟမ်း ဟာ ဘရာဇီးသားကို ခေါ်ခဲ့တဲ့ ဈေးထက် ၁၀ ဆ ကျော်ပြန်ရခဲ့ ပေမယ့် ရန်းနစ် ကတော့ သူ သေချာ စောင့်ကြည့်ထားတဲ့ ကစားသမားဟာ ဒီထက်ပိုတဲ့ တန်ကြေး ရှိခဲ့တာကို သံသယ ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။
ဂူစတာဗိုလ် ဟာ ဘိုင်ယန်မှာ ၂၀၁၁ ကနေ ၂၀၁၃ အထိ ကစားခဲ့ပြီး အမှတ်ပေးဖလား ၊ ရှုံးထွက် ဖလား နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် တို့ကို ရယူခဲ့ ပါတယ် ။
၅ ။ ဂျိုရှုအာ ကင်မစ်ချ် – ပေါင် ၃ သိန်း ၅ သောင်း
အခု ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ရဲ့ အသည်းနှလုံး ဖြစ်နေတဲ့ ကင်မစ်ချ် ဟာ ရန်းနစ် ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ သူတွေထဲက အလားအလာ အကောင်းဆုံး ကစားသမား တဦး ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
အဲ့ဒိတုန်းက လိုက်ပ်ဇစ် ဟာ ဂျာမန် တတိယတန်းမှာသာ ရှိနေ သေးပြီး ကင်မစ်ချ် ကို ပထမအသင်းကြိးမှာ နေရာပေးမယ် ဆိုတဲ့ ကတိနဲ့ စတုဂတ် အကယ်ဒမီ ကနေ ခေါ်ယူခဲ့တာပါ ။
ပြန်လည် ခေါ်ယူခွင့် စာချုပ်ကြောင့် လိုက်ပ်ဇစ် ဟာ ကင်မစ်ချ် ဆီကနေ အကျိုးအမြတ် များများ မရခဲ့ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ရန်းနစ် ရဲ့ အကဲဖြတ်နိုင်စွမ်း ကတော့ လက်ဖျားခါလောက်စရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
၆ ။ အူပါမီကာနို ( ပေါင် ၁.၉ သန်း )
ရက်ဘူး အသင်းတွေအတွက် ရန်းနစ် ရှာဖွေ ပေးခဲ့တဲ့ နောက်ထပ် ရွက်ပုန်းသီး ကစားသမားလေးကတော့ ပြင်သစ် ခံစစ်မှူး အူပါမီကာနို ပါပဲ ။
အခုချိန် မှာတော့ ရန်းနစ် လည်း လိုက်ပ်ဇစ် မှာ မရှိတော့သလို အူပါမီကာနို ကလည်း ဆဲလ်ဘတ် ကနေ လိုက်ပ်ဇစ် ၊ လိုက်ပ်ဇစ် ကနေ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဆီကို ယူရို သန်း ၄၀ လောက်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ ကစားနေခဲ့ ပါပြီ ။
၇ ။ အခြားသော ခေါ်ယူမှုများ
ရန်းနစ် ဟာ ဒီ ထိပ်တန်းအဆင့်ရောက်လာတဲ့ ကစားသမားတွေ အပြင် ဒမ်ဘာဘား ( ဟော့ဖမ်ဟမ်း ) ၊ ယူဆပ် ပေါလ်ဆင် ( လိုက်ပ်ဇ် ) ၊ ဒေးဗစ် အလာဘာ ( ဟော့ဖမ်ဟမ်း ) ၊ တီမိုဗာနာ ( လိုက်ပ်ဇစ် ) တို့ကိုလည်း ရှာဖွေ ခေါ်ယူ ပေးခဲ့ ပါတယ် ။
အခု ရန်းနစ် တယောက် ဥရောပ ရဲ့ အစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဆီကို ရောက်လာ တော့မှာပါ ။
ဘယ်လို ကစားသမားတွေကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ် ခေါ်ယူပေးသွား မလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ . . . ။
Previous Article “ အိုးထရက်ဖို့ဒ် ဆီ ရန်နစ် ရောက်တော့မယ့် သတင်းက အခြားအသင်းတွေ အတွက် ဘယ်နည်းနဲ့မှ သတင်းကောင်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး” ကလော့ပ်
Next Article ချဲလ်ဆီး vs မန်ယူနိုက်တက်?? ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၁၃ အတွက် မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ